RIAA wants Google to do more to fight 'piracy' - Izindaba Rule
RIAA ufuna Google ukuze senze okuningi ukulwa 'ukudunwa’
ABAMPOFU Ukuqopha Industry Association of America (RIAA) ukhathele becela Google ukuthatha phansi izehlakalo ngabanye okuthiwa ukuphulwa kwe-copyright futhi ufuna ukukuqeda ukwenziwa banhammer groundhog Day.
I RIAA uthathé nombono eziphikisanayo ukuthi of ye-Google senior iseluleko Inqubomgomo Yemfihlo Katherine Oyama ngo ubufakazi bakhe ngaphambi US House of Abamele Intellectual Property subcommittee leKomiti Lwezobulungiswa kuleli sonto.
Oyama wayesanda kufakaza ukuthi mhlawumbe nokuhlukaniswa akuzona uhlelo best, yenezela ngokuthi asivulele ukuhlukuluza. Uthe i-Google iphatha nokuhlukaniswa amaningi ngesonto 2014 njengoba wayenza kusosonke 2010.
“Indlela engcono ukulwa ukudunwa unawe kangcono, kuwusizo kakhudlwana, ezinye izindlela ezisemthethweni ukudunwa, nezinsiza esukela Netflix kuya Spotify iTunes sebebonise,” wathi. “Inhlanganisela kwesokudla intengo, lula, futhi yokusungula uyokwenza kakhulu ukunciphisa ukudunwa kuka zokuqinisa umthetho kungakusiza.”
I RIAA wenza izinkulumo zalo siqu subcommittee, futhi usinike ubani ukuthi ufuna kube nekhophi ubufakazi Oyama anabo izichasiselo yayo siqu (PDF). I RIAA uyawuthanda koMthetho Digital Millenium Copyright (DMCA) uhlelo, kodwa ingabe bakuthola kuyakhungathekisa.
Where iseluleko Google kusho into eyodwa, the RIAA wathatha line eziphikisayo. Ngokwesibonelo, lapho wasikhuthaza izinhlelo yokuzithandela the RIAA waphendula-Google “ongakabi empeleni ubenethemba umbono walokho okubizwa ngokuthi isivumelwano yokuzithandela abanikazi bokuqukethwe”.
I RIAA futhi ishicilele ubufakazi uSihlalo walo futhi CEO, Cary Sherman. Bekanye isikhalo igunyaze izinhlelo zokuqapha, Sherman wacela Google ukuyisiza ukuqeda umdlalo nsuku of 'Whack-a-imvukuzane’ udlala.
“[Google kufanele] ukuqinisekisa ukuthi uma izixhumanisi kokuqukethwe zithathwa phansi, okuqukethwe efanayo kule ndawo hhayi njalo kabusha ngokobungako uma nelinabantu by the site pirate, abakhipha inqubo takedown alunamsebenzi,” uthe.
I RIAA zingathanda ukubona 'pirate’ amawebhusayithi deranked, futhi bafohla phansi imiphumela yosesho, kanye nokwethulwa a “wayethembele” bheji lokho ubheka amawebhusayithi njengezenzo ezifanele. Ekugcineni, kubonakala ukuthi nje ufuna ride lula.
“Kungakhathaliseki ukuthi Google ithatha phansi namuhla, search yayo injini ngeke spider the pirate sites kusasa Inkomba kabusha konke okuqukethwe efanayo ngokungemthetho emasayithini pirate. Bonke labo links ukuba ngokwephula umthetho amafayela nomculo ngokuzenzakalelayo nelinabantu ngamunye indawo pirate ngemva takedown lanamuhla kabusha ngokobungako futhi avele kwimiphumela yosesho kusasa,” obengeziwe Sherman.
“Nsuku zonke kumele izaziso ezintsha ukuthatha phansi links kufana okuqukethwe okungekho emthethweni sathatha phansi ngayizolo. Kufana 'groundhog Day’ ngoba nokuhlukaniswa.
21689	0 Cary Sherman, Digital Millennium Copyright Act, Google, groundhog Day, Okwenziwe ngenqondo, iTunes, Ukuqopha Industry Association of America, RIAA
← Six imikhumbi Indian atshalwa search for jet Malaysian Planet X inganekwane ziyadalulwa →